In kasta oo shirku diiradda lagu saaray teknolojiyadda, haddana waxaa lagama maarmaan ah in tikniyoolajiyadda suuqgeynta ay aqoonsadaan waxa ku soo kordhaya teknolojiyadda macluumaadka. Shirkaduhu waxay horeyba ugu tiirsan yihiin tikniyoolajiyadda dhinac kasta oo ganacsigooda ka mid ah - mustaqbalkuna wuxuu la yimaadaa awood uu ku beddelo dhinac kasta oo kale.
Si kale haddii loo dhigo, kulligeen waan noqonaynaa technology shirkadaha. Shirkadahaas oo casriyaynaya meheradooda, shaqaalaynaya shaqaalaha saxda ah, iyo hubinta amniga ayaa aasaas u ah ogaanshaha keydka gaarka ah ee furaya miisaaniyadaha bilaabaya wax soo saarkooda iyo adeegyadooda. Waa kuwan qaar ka mid ah ereyada ay tahay inaad bilowdo inaad fahamto kana fikirto sida ay u bedelayaan shirkaddaada iyo rajooyinka macaamiishaada mustaqbalka dhow:
Iswaafiqida - kaabayaasha isku dhafan (CI) waxay isu keentaa dhinacyada aasaasiga ah ee xarunta xogta - xisaabinta, kaydinta, isku xirka, iyo hufnaanta. Majiro qaabeyn shaqsi ah, oo kaliya barxad si fudud loogu cabiro natiijooyinka waxqabadka la filayo.
Xusuusta joogtada ah - xisaabinta casriga ahi waxay kuxirantahay labadaba kaydinta adag iyo waliba xasuusta, iyada oo xisaabintu ay xogta gadaal iyo gadaal udhaqaajineyso. Xusuusta joogtada ah waxay bedeshaa xisaabinta iyadoo la ilaalinayo keydinta xusuusta halka lagu xisaabin karo. Nidaamyada hawlgallada adeegaha ayaa la hagaajin doonaa iyadoo la ogaanayo labalaab illaa toban jeer xawaaraha server-yada shalay.
Sirdoonka Artificial - halka suuqleydu u fahmayaan AI inay tahay awoodda barnaamijka qabaa soona saarto barnaamij u gaar ah. In kastoo taasi u muuqato cabsi, runti waa wax xiiso leh. AI waxay fursad u siin doontaa kaabayaasha IT-ga inay balaariyaan, yareeyaan qarashka, isla markaana ay saxaan arrimaha iyada oo aan la faragelin.
Xisaabinta Adeegga - markaad gasho albaabka, kama fakaraysid baahida, shabakadda, amperage, ama keydinta lagama maarmaanka u ah hubinta qalabkaaga. Tani waa jihada aaladaha mobilada, laptop-yadayada, iyo kaabayaasha adeegeena. Siyaabo badan, waxaan horeyba u joognay laakiin waxay noqoneysaa mid dhab ah.
Xaqiiqda isku dhafan - Awoodda xisaabinta ee aan halkaan uga hadlayno waxay sii wadaa inay ka sii ballaadhiso wax kasta oo aan weligood malayn, innaga oo awood noo siinaya inaan kor ugu qaadno adduun kor u kacay midkeenna dhabta ah. Ma noqon doonto wax aad uga fogaan hadda kahor intaanan la falgalin adduunkeenna wixii ka dambeeya iPhone-ka ama Google Glasses, oo aan yeelanno beero la dhererin karo oo dhex-gelaya adduunkeenna dhabta ah macluumaadka aan ku ururinay si aan nolol kasta kor ugu qaadno.
Hal tusaale oo lagu sifeeyay wuxuu ahaa adeegsiga IoT iyo beeraha halkaasoo lo'da soosaarka caanaha lagu beeray aalado ilaalinaya cunnadooda iyo nafaqadooda si kor loogu qaado xinjirowga lagama maarmaanka u ah soosaarka farmaajo. Tani waa heerka hal-abuurnimada iyo waxtarka leh ee aan kala hadlayno teknoolojiyaddan. Cajiib!
Kaliya maahan mid ka mid ah teknoolojiyaddan inay horay noo sii wadaan, waa iskudhafka dhamaan si deg deg ah suuqa u aada. Waxaan aragnaa dardargelinta tikniyoolajiyadda aynaan arkin tan iyo markii la bilaabay Internetka iyo eCommerce. Iyo, sida isbeddeladaas, waxaan daawan doonnaa sida shirkado badani u qabsadaan saamiga suuqa iyada oo loo marayo korsashada halka kuwa kale oo badanna laga tagay. Macaamiisha ayaa korsanaya, la qabsan doona, waxayna filayaan in shirkaddaada ay si buuxda u maalgashato tikniyoolajiyad si ay uga caawiso khibradooda khibradaada.
Shaacinta: Waxaa lacag iga qaatay Dell si aan uga soo qeyb galo Dell EMC World oo aan uga shaqeeyo Podcasts-ka Nuurka. Si kastaba ha noqotee, iyagu kama ayan caawin qorista qoraalkan sidaas darteed waxay macnaheedu noqon kartaa in sharraxaaddaydu ay yara yaraatay. Waan jeclahay tikniyoolajiyadda, laakiin macnaheedu maaha xitaa waxaan si fiican u fahmay dhinac kasta oo ka mid ah!